Vokatra vaovao momba ny fampivoaran-tena sy ny teny malagasy – Blaogin'i Voniary
Vokatra vaovao momba ny fampivoaran-tena sy ny teny malagasy
Manolotra vokatra vaovao ho anao indray ny Blaogin’i Voniary amin’izao famaramparanana ny taona izao. Izahay moa dia tsy mianona fotsiny amin’ny famokarana lahatsoratra eto amin’ny blaogy ao anatin’ny ezaka fampiroboroboana ny teny malagasy sy fanampiana ny mpiray tanindrazana amin’ny fampivoaran-tena. Izany indrindra no nahatonga anay namoaka ny Diary Sy Rakibolana 2020 ary ny boky “Raiso an-tanana ny fiainanao” tamin’ny endriny PDF sy ebook. Ankehitriny, vokatra karazany telo no atolotra anao ary inoana fa hahaliana anao avy hatrany. Hahazo tombony ianao satria sady hahay teny malagasy no hiroso lalina kokoa amin’ny fampivoaran-tena. Ary ambonin’izany rehetra izany ho faly sy afa-po fa mandray anjara amin’ny fanohanana ny Vita Malagasy.
Diary Sy Rakibolana 2021
Ny Diary Sy Rakibolana dia sady diary misy datin’andro no ahitana voambolan-tsehatra. Izany hoe fitaovana azonao ampiasaina handaminana ny fandaharam-potoananao na hanoratana ny tantaram-piainanao izy io. Tsy izay ihany anefa fa misy voambolan-tsehatra na “termes techniques” maro isan-karazany ao, dikanteny malagasy frantsay, hanampy anao hampiasa teny malagasy eo amin’ny sehatra ikatrohanao sy ny andavanandronao. Fialan-tsiny re matetika manko ny hoe “tsy ampy voambolana ny teny malagasy”. Koa inty misy fitaovana hanampy anao hamantatra ireo voambolana malagasy na efa tranainy na vaovao. Lohahevitra 12 ilaina amin’izao vanim-potoana iainantsika izao no atolotra anao ao: ny fandrosoana lovainjafy, ny haikintana, ny fahasalamana, ny nahandro sy ny sakafo, any an-tanandehibe, ny fitantanana sy ny fandraharahana, ny vatan’olombelona, ny riaka sy ny morony, ny didy aman-dalàna, ny fanatanjahantena, ny aterineto ary ireo matoanteny ilaina. Marihana fa voambolana sy lohahevitra hafa no hita tao amin’ny Diary Sy Rakibolana 2020. Izany fitaovana sy loharanom-pahalalana izany dia omena anao amin’ny vidiny 39 000 Ar monja.
Boky “Raiso an-tanana ny fiainanao”
Boky fampivoran-tena nivoaka tamin’ny endriny PDF sy ebook izy ity tamin’ny volana Mey, tao anatin’ny fihibohana. Maro no efa niandry ny fivoahan’ny boky taratasy satria hafa ihany ilay misy azo kasihin-tanana, tahirizina sy aranty eo amin’ny fitoeram-boky. Indro àry fa tonga izy ity izao. Tsy hanazava ela momba ny ao anatin’ilay boky intsony aho fa ato no ahitanao izany fa raha fehezina dia boky manampy anao hitraka, hiroso, hijoro amin’ny maha ianao anao, hankafy fiainana ary hanana fiadanana anaty izy io. Aroso amin’ny alalan’ny lahatsoratra 20 mivoy toe-tsaina mpandresy sy fijery miabo izany ao anatina pejy miisa 100. 18 000 Ar ny vidiny.
Ity no vokatra tena vaovao be mampitambatra ny teny malagasy sy ny fampivoaran-tena. Kahie satria 80 pejy malalaka no atolotra anao. Mpandresy satria natao hikolokoloana ilay toe-tsaina mpandresy ao aminao izy ity. Izay tranga, asa, fihetsika mitondra anao amin’ny fahombiazana no hasaina hosoratanao ao. Fanampin’izany, misy teny notsongaina, amin’ny teny malagasy mazava ho azy, manampy anao hanana fijery miabo isaky ny pejy. Raha ny fanirinana moa dia natao 365 pejy izy ity amin’izay misy teny manentana hotsakotsakoina isan’andro saingy noho ny antony maro samihafa dia natao 80 pejy ihany. Amin’ny taona ho avy angamba mety ho afaka hianoka izay kahie mpandresy 365 pejy izay ianao raha sitraky Ny Tompo. Amin’izao aloha dia atolotra anao amin’ny vidiny 19 000 Ar izy ity.
Misokatra ny famandrihana
Efa misokatra ny “précommande” na famandrihana ireo vokatra rehetra ireo. Izany hoe mbola tsy nivoaka izy ireo fa miandry ny famandrihana avy any aminareo mpanjifa. Efa fanao eo amin’ny varotra an-jotra any amin’ny firenena mandroso ny famandrihana ary vao manomboka miparitaka izany eto amintsika.Nisafidy an’ity fomba fanao efa hita eo amin’ny sehatry ny varotra ity ny Blaogin’i Voniary noho ireto antony ireto
Miankina betsaka amin’ny fatokisanareo mpanjifa anay izahay
Ny vola avy any aminareo no hamatsianay ny famokarana ny entana
Voasoroka ny fandaniana be fahatany satria izay isan’entana nisy namandrika ihany no vokarina
Tsy hisy ny entana tsy lany avy eo
Ahoana ary ny fandehan’ny famandrihana eto amin’ny Blaogin’i Voniary?
Lazao aminay izay entana tianao hofandrihana amin’ny alalan’ny famenoana ity “formulaire” ity na amin’ny fandefasana MP amin’ny pejy Facebook Blaogin’i Voniary na amin’ny fiantsoana ny 034 22 766 74
Raisinay ny mombamomba anao: anarana, laharam-pinday, toerana, andro sy ora anaterana azy…
Aloavy amin’ny alalan’ny Mvola 034 22 766 74 ny vidin’ny entana
Miandry ny fivoahan’ny ireo vokatra isika
Aterinay any aminao ny entana amin’ny daty sy ora nifanarahana
Izay ary no ela fa dia miandry ny famandrihana avy aminao izahay e! Tsarovy fa sady manohana ny Vita Malagasy ianao no hahazo tombontsoa eo amin’ny fiainanao manokana.
Fanairana hambom-po, Gasy fiaina
boky fampivoaran-tena, boky voniary, diary 2021, diary gasy, diary sy rakibolana, diary sy rakibolana 2020, diary sy rakibolana 2021, diary vita malagasy, kahie mpandresy, mpandresy ianao, raiso an-tanana ny fiananao, vokatra blaogin'i voniary
Ny Covid-19 sy ny fiovana naterany teo amin’ny fiainako